श्यामकृष्ण थापा आइतवार, चैत २०, २०७३ 3222 पटक पढिएको
‘सर म होमवर्क गर्छु । भोलि पूरा गर्छु । मलाई नपिट्नुस् सर, मलाई नपिट्नुस् ..... !' मेघा राति सुतेको बेला भटभटाइन् ।
‘बाबा ... मामु ... आज पनि स्कुल जान्न होमवर्क सकिएकै छैन । मलाई सर मिसले बेस्सरी पिट्नुहुन्छ । कान समातेर कक्षाको अगाडि राख्नुहुन्छ । साथीहरूले मलाई गिज्याउँछन् । त्यसैले बाबा, मामु .... आज म जाँदै जान्न' पुन मेघा भटभटाइन् ।
राति सुतेको बेलामा मेघा बर्बराएकी देखेर उनको मम्मी, बाबा निकै चिन्तित भए । उनीहरू आश्चर्यमा परे । पहिलेपहिले यसरी नबरबराउने छोरी केहीदिन देखि निरास र दुःखी देखिन्थी । आज त उनी धेरै बरबराउन थालिन् । ‘यिनलाई के भएछ, विद्यालयमा गृहकार्य नगरेकै कारण सजाय दिँदा रहेछन् जस्तो छ ', मेघाको मम्मीले बाबालाई बताइन् । ‘गृहकार्य नगरेकै कारण सजाय दिन त नपर्ने हो, सजाय दिने गरेको हो भने त राम्रो होइन । भोलि नै गएर स्कुलमा बुझ्छु', मेघाको बाबाले आफ्नी पत्नीसँग सल्लाह गरे ।
मेघालाई मात्रै होइन आरती, निरू, प्रवेश, सुशान्तलाई पनि विद्यालयमा गृहकार्य नगरेकै कारणले सजाय दिइएको छ । आज पनि मिसले पिट्दै भनिन्, ‘तिमीहरूले आज पनि गृहकार्य गरेनौ । यो त अति भयो । सधैं खेल्ने, टीभी हेरेर बस्ने, मोबाइल चलाउने, गृहकार्य चाहिँ नगर्ने । त्यसकारण पढाइमा तिमीहरू सधैं कमजोर हुने अनि गुनासो हामीले सुन्नु पर्ने ? ' भन्दै लठ्ठीले हातमा हानिन् । पछि उनीहरूलाई उठबस गर्न लगाइन् र पुनः सबै साथीहरूको सामु उभिन लगाइन् ।
सजायको कारण राति मेघा र नम्रतालाई हनहनी ज्वरो आयो । उनीहरू बेलाबेलामा तर्सिने र डराउने गर्न थाले । उनीहरूका बाबा स्कुलमा प्रिन्सिपललाई भेट्न गए । आरती, नीरू, सरु, प्रवेश, सुशान्तका अभिभावक पनि त्यहाँ आएका थिए । उनीहरूले गृहकार्य बढी दिने र गर्न नभ्याउँदा कडा सजाय दिने गरेको बारेमा गुनासो व्यक्त गरे ।
मेघा र आरतीका बाबाले पनि थपे, ‘हाम्रो बच्चाहरूको हालत पनि उस्तै छ । स्कुलमा सर मिसले नराम्रोसँग पिट्ने गर्दा रहेछन् । अस्ति लठ्ठीले हानेर आरतीको हात सुन्निएको थियो ।' सुशान्त, प्रवेशका अभिभावकले पनि यसरी भने, ‘सर मिसले टाउकोमा हिर्काएर होला सुशान्त र प्रवेशको टाउकोमा पनि टुटुल्को उठेको थियो । गाला र कान रातो भएको थियो । कान बेस्सरी निमोठेर घाउसमेत भएको थियो । रगतसमेत देखिन्थ्यो ।' अभिभावकको गुनासो सुनेपछि प्रिन्सिपलले अभिभावकलाई सम्झाउँदै भने, ‘उनीहरूले धेरै दिन भयो होमवर्क नगरेको भन्ने सर र मिसको गुनासो थियो । मैले सम्झाउनू, पिट्ने काम नगर्नू भन्ने निर्देशन दिएको थिएँ । यस बारेमा के हो बुझ्छु । बिरामी हुने चोट लाग्ने गरी सजाय दिन हुँदैन यो हाम्रो विद्यालयको नीतिविपरीत कार्य हो । यस्तो हो भने त्यस्ता शिक्षकशिक्षिकालाई हामी कारबाही गर्नेछौं ।'
‘तपार्इंको विद्यालयमा बच्चाहरूलाई मायालु वातावरणमा पढाइन्छ, सिकाइन्छ भनेर हामीले ठूलो विश्वास गरेका थियौं तर यहाँको वातावरण, व्यवहार देखेर हामी सन्तुष्ट छैनौं । विद्यालयको नीतिविपरीत काम गर्ने, गल्ती गर्ने गर्नेलाई कारबाही गर्नुहोस् । यस्ता शिक्षक हाम्रो बच्चालाई आवश्यक छैन ।' ‘सजाय दिनु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । हामीले धेरै सम्झाउँदा फकाउँदा पनि नमान्ने विद्यार्थीलाई मात्र सजाय दिने गरेका छौं । सामान्य उठबस, कान समाउन लगाउने, उठाउने, सामान्य सजाय दिने गरेका छौं' अभिभावकलाई पुनः सम्झाउँदै उनले भने, ‘बच्चाहरू पनि अनुशासित भई विद्यालयले दिएको गृहकार्य गर्नुपर्छ ।
यहाँहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूले गृहकार्य गरेका छन् कि छैनन् बुझ्नु पर्दछ । गृहकार्य नगरेकै भए सम्झाएर गराउनु पर्दछ । नजानेको भए सिकाउनु पर्दछ । अभिभावकबाट पनि यसो भएमा सजाय दिनुपर्ने परिस्थिति आउने थिएन ।' अभिभावकले पनि प्रिन्सिपलको प्रतिउत्तर दिँदै भने, ‘हामीले हाम्रो सन्तानको बारेमा ध्यान दिएका छौं । हाम्रो छोराछोरीको अवस्था कस्तो छ, गृहकार्य गर्छन् कि गर्दैनन् सबै हामीले बुझेका छौं ।' प्रिन्सिपललाई सम्झाउँदै उनीहरूले फेरि भने, ‘गृहकार्य धेरै भएकोले बच्चाले गर्न भ्याउँदैनन् । यसैका कारण बच्चाहरूले तनाव लिइरहेका देखिन्छ । त्यसैले बच्चालाई कम गृहकार्य दिएर पनि राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ कि सर ? '
‘त्यस्तो होइन । होमवर्क धेरै दिँदैमा, किताब धेरै बोकाउँदैमा राम्रो, गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौं भन्ने मान्यता हाम्रो होइन । पुस्तक अन्य स्कुलमा प्रचलनमा आए अनुरूप व्यवस्था गरिएको हो । हामीले पनि किताब धेरै भयो, बच्चाले बोझ महसुस गरिरहेको, उनीहरूलाई बोक्न समेत गाह्रो भइरहेको ठानेका छौं । तर प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा अन्य विद्यालयभन्दा पृथक्, कम पुस्तक राखेर पढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । यसो गरेमा पनि गुनासो आउँछ । पढाउने राम्रो सर नभएर किताब राखेन, अन्य विद्यालयमा कति किताब छ । सबैमा राम्रो पढाइ हुन्छ । यहाँ त पूरा किताब राखेको रहेनछ । पढाइ पनि हुँदैन कि क्या हो भन्ने गुनासो आउँछ । त्यसकारण हामी चाहेर पनि कम किताब राख्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । प्रत्येक पुस्तकबाट गृहकार्य दिइने कारण धेरै भएको हुन सक्छ । अब हामी यसतर्फ विचार गर्नेछौं र विद्यार्थीलाई सकेसम्म कम होमवर्क दिनेछौं', प्रिन्सिपलले अभिभावकलाई सम्झाउने कोसिस गरे ।
‘विचारमात्र गर्ने होइन सर, अब निर्णय गरी आजबाटै बच्चाले भ्याउने मात्र गृहकार्य दिनुहोस् । ससाना बच्चाहरूलाई भारी किताब बोक्न पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुस् । अति आवश्यक पुस्तकमात्र राखेर पढाउनु होला । यसो भएमा बच्चाहरूलाई निकै सजिलो हुन्छ', अभिभावकले पनि थपिहाले । बच्चाले सहज रूपमा कुनै डर र त्रासबिना पढ्न पाउने वातावरण बनाउनेतर्फ विद्यालय सजक हुने प्रतिबद्धता प्रिन्सिपलले जनाए । सोही दिन विद्यालयमा शिक्षक मिटिङ बोलाइयो । मिटिङमा गृहकार्य कम दिने र बच्चाहरूलाई सकेसम्म सजाय नदिने, दिनै परे पनि साधारणमात्र दिने निर्णय गरियो ।
अभिभावकको गुनासो तथा विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक अवस्थालाई ध्यान दिएर कम गृहकार्य दिँदै अति आवश्यक पाठ्यपुस्तकमात्रै राखेर विद्यालयमा पढाउन थालियो । त्यसपछि विद्यार्थी पनि खुसी हुन थाले । विद्यालय आउन नमान्ने मेघा तथा उनका साथीहरू सुशान्त र प्रवेश पनि नियमित विद्यालय आउन थाले । विद्यालयबाट दिइने सबै गृहकार्य पूरा गर्न थाले । उनीहरूको पढाइ पनि राम्रो हुन थाल्यो । उनीहरू अतिरिक्त क्रियाकलाप र नृत्य, संगीत, खेलकुदजस्ता प्रतियोगितामा समेत पोख्त हुन थाले ।
आइतवार, असोज २९, २०७४ यस्तो छ तिहारको महत्व
आइतवार, असोज २९, २०७४ उबेलाको तिहार
आइतवार, असोज २९, २०७४ जमिलाको जुठो
आइतवार, असोज २२, २०७४ शैक्षिक सामग्रीमा पल्किए विद्यार्थी
आइतवार, असोज २२, २०७४ चंगाचरी
आइतवार, भदौ २५, २०७४ गाडीहरूको गाउँ
आइतवार, भदौ २५, २०७४ दोस्रो अरुणिमा कप फुटबल अन्तर्गत पहिलो चरणका खेल सम्पन्न
आइतवार, भदौ २५, २०७४ चरिमायाको सपना साकार पार्दै ज्योति
कर्मचारी समायोजन नियमावली चाँडै 895
'पूर्वराजाको अभिव्यक्ति निरर्थक' 1784
'हेबीवेट' नेताका प्रतिस्पर्धी हेबीवेट नै 3716
आइतबार बिहानै राजधानीमा गोली चल्यो, एक घाइते, पाँच पक्राउ 7962
सी जिनपिङका पाँच वर्ष: व्‍यक्तिगत अधिकार बढ्‍यो, देशको लागि खतरा 24846
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी 4279
युवती विवादमा गोली चलाउने पक्राउ 492
काठमाडौंको ठमेल अब 'सवारीसाधनमुक्त क्षेत्र' 452
गोरखामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप : एकको मृत्यु, दुई सय बढी बिरामी 670
फरकफरक दुर्घटनामा परी सुनसरीमा दुईको मृत्यु 530
तीन लाख नगदसहित ३० जुवाडे पक्राउ 1222
कल्याण गुरुङलाई गोली हान्ने चारजना पक्राउ 6640
टेलिकमले कात्तिकभर नि:शुल्‍क यूसिम बाड्‍ने 29978
पीओएस मेसिनको प्रयोग बढ्यो 5745